Date My Pet » 5 Ve ny sy Don'ts ny mahomby Online Dating
amin'ny Aprily Aragam
Last nohavaozina: Oct. 15 2020 | 3 min namaky
Online mampiaraka lasa iray amin'ireo fomba malaza indrindra hihaona olona vaovao. Online mampiaraka, toy ny zavatra hafa rehetra, manana ny tsara sy ny ratsy hevitra. Ahoana àry no hahafa-po ho anao? Ity lahatsoratra ity manoritra 5 manao sy don'ts izay hanampy anareo hahita aterineto kely niaraka hampandeha tsara kokoa.
Of: Fenoy ny mampiaraka mombamomba
Zava-dehibe ny mamaly ireo fanontaniana eo amin'ny fiarahana profil. Izany no olona voalohany vintana mahazo mianatra kely momba anao. Tsy voatery hilaza ny tantaram-piainany manontolo, fa ianao te-hanome, fara fahakeliny, ny zava-misy zava-dehibe ny mpivady. Ny momba ahy ao amin'ny fizarana faha-milaza izay tianao lazaina ianao na miasa, na mandeha any an-tsekoly, tia manao zavatra amin'ny fotoana malalaka, ary miresaka zavatra somary tsy manam-paharoa izay mampiavaka anao amin'ny hafa ny olona. An-tsitrapo ve ianao amin'ny lakozia lasopy indroa isam-bolana? Inona kay ny boky fikambanana ihany no mamaky ny Classics? Lazao azy! Dia toa tahaka ny zavatra kely aminao, fa ny olona iray mamaky ny mombamomba izany dia hanampy anao miavaka amin'ny hafa.
Aza: Miresaka momba ny fanantenana sy ny nofinofy ho fifandraisana
Tsy tsara ny milaza tsara ianao raha mitady ny fitenenana mahazatra na zavatra kokoa fifandraisana maharitra. Te hihaona olona izay maniry ny toy izany. Raha toa ka manomboka miresaka momba ny fomba dia handeha ho any handany ny Krismasy voalohany miara-, Inona no karazana fampakaram-bady no manonofy ianao ny, na firy ankizy tianao ny hanana, ianao dia handeha ho any hampitahorana mety daty intsony. Hahafoy an'izay resaka fa taty aoriana rehefa lehibe kokoa efa lasa.
Of: Add vao haingana sary
Mety kokoa fa naka sary ny telo taona lasa izay tao amin'ny valan-javaboahary izay ianao no mahatsiaro ho toy ny bombshell, fa zava-dehibe ny fampiasana ny vao haingana sary. Miova ny olona rehefa mandeha ny fotoana na dia mety mbola mitady hiady hevitra tena be toy izany taloha sary. Ny volony loko, lavany, sy ny fomba fanoratra dia mety niova. Mety ho efa nandatsaka na nitafy kilao vitsivitsy. Na dia ny fomba manokana mety ho niova. Raha mamoaka sary sy hihaona olona amin'ny olona, fantatrao fa handeha ho miandry ny olona eo amin'ny sary. Eritrereto hoe ahoana no mety ho fahatsapanao raha ianao ilay olona izay mihaona nisy iray taona roa sary izay nanana kely volo kokoa sy tsy kely kibo. Tsy ny olona fotsiny no nahatonga ny te-hahafantatra izay izy ireo mivory.
Aza: Hiandry ela loatra ny hihaona
Online fiarahana toerana mety ho toerana be olona hihaona vaovao, nefa mety tsy tianao ny fifandraisana hijanona anaty aterineto nandritra ny volana amin'ny farany. Zava-dehibe ny hitondra ny vaovao avy any an-tserasera ny fifandraisana amin'ny olona. Rehefa efa nanakalo mailaka sy andinin-teny ianao, dia afaka mifindra any amin'ny dingana manaraka, izay miresaka an-telefaonina. Raha mbola mahatsapa ny fifandraisana sy ny te-hihaona, manao ny daty! Raha lavitra anao, ary tsy afaka mitondra fiara fotsiny hihaona tsirairay, fara faharatsiny, mandra-Skype afaka.
Of: Matokia ny gut
Raha toa ianao mametraka ny mampihomehy fihetseham-po momba ny olona iray noho ny zavatra ny dia ny hoe: na amin'ny alalan'ny fanaovana ny fiaviana Check ianao efa nahita zavatra izay tsy manampy ny, matoky izany fahatsapana. Azo antoka fa afaka mametraka fanontaniana momba izany, fa raha mbola ny ho tahaka ny misy zavatra eny, tonga ny fotoana mankany aoriana, ary nihaona lasa olona vaovao. Tsy te-handany ny fanombohan'ny fifandraisana vaovao manavaka lainga sy ny zava-misy sy tsy tapaka manontany tena raha toa ka ny zavatra manaraka avy amin'ny vavany dia tsy fahamarinana. Matoky foana ny gut fihetseham-po.
Online mampiaraka tsy ho foana malamalama mitaingina. Manao fahadisoana ianao, ary mahalala tsara ny fotoana manaraka.